Taxi eto an-dRenivohitra : inona marina no tadiavin’ireo mpitokona ? | NewsMada
Taxi eto an-dRenivohitra : inona marina no tadiavin’ireo mpitokona ?
Niteraka resabe tato ho ato, ny momba ilay hoe « lanterne » vaovao hampiasain’ny taxi eto an-dRenivohitra. Tsy manaiky ny fampiasana azy io ireto farany. Tsotra ny antony : hoe tsy mahazo tombony amin’izany izy ireo fa ny kaominina Antananarivo-Renivohitra no ho voky. Ity “lanterne” vaovao ity moa tsy ny kaominina velively no tompon-kevitra fa mpandraharaha vao erotrerony iray te hampiasa ny taxi hatao fitaovana dokambarotra, toy ireny fahita any amin’ny tany mandroso ireny. Io “lanterne” io izany sady famantarana ny taksi no hanaovana dokambarotra rehefa misy orinasa na fikambanana, eny fa na antoko politika aza, rehefa andron’ny fampielezan-kevitra, vonona handoa ny sarany amin’izany.
Mazava ho azy fa zaraina amin’ny tompon’ny fiara ny vola azo amin’izany rehefa afaka ny fandaniana rehetra an’ilay mpandraharaha. Misy ampahany ho ań´ny kaominina toy ireo takelaka lehibe fanaovana dokambarotra sy afisy manerana ny tanàna ireny, izay samy hakana sarany avokoa. Misy koa ampahany ho an’ilay mpikarakara ny “lanterne” sy ny mpanjifa ny dokambarotra. Tsy very anjara, mazava loatra, ny taxi mitondra ny “lanterne” hametrahana ny dokambarotra.
Tsiahivina fa talohan’ny nirosoana tamin’io tetikasa izay miteraka asa maro ihany koa ho an’ny tanora io, efa nisy fivoriana maromaro niarahana tamin’ireo mpitondra taxi. Efa tapaka tamin’izany fa omena 10.000 Ar isaky ny manao “contre-visite” ny taxi. Intelo isan-taona ny hanaovana izany. Nifanarahana ihany koa fa omena “bonus” ny taxi rehefa mandeha ny dokambarotra.
Rehefa tapaka teo anivon’ny mpitondra taksi, ary nanaiky ihany koa ny kaominina Antananarivo Renivohitra, niroso tamin’ny fanamboarana ireo “lanternes” ny orinasa tompon-kevitra. Nisy ny fametrahana fomba fitantanana raitra dia raitra tamin’ny fampiasana “informatique” sy ny fampidirana mpiasa maro.
Vitsy anisa, tsy mahasolo tena…
Gaga anefa ny rehetra fa nivadika tanteraka tamin’ny fifanekena ny taxi vitsivitsy. Vitsivitsy tokoa, satria raha ny filazan’ireo taxi efa nandray ny “lanterne” vaovao, 100 mahery eo ho eo ireo mpitokona. Ny taxi miasa eto an-dRenivohitra anefa, manodidina ny 7.000 any ho any. Fantatra ihany koa fa nanatrika ireo fivoriana maro samihafa ary nanaiky ny fifanarahana ilay ramatoa milaza ho filohan’ny fikambanan’ny taxi. Mahavariana ny rehetra ny fanakianany sy ny fitsipahana ity “lanterne” vaovao ity. Raha ny filazan’ireo tompona taxi anefa, tsy misy maharatsy ny fampiasana ity “lanterne” vaovao ity mihitsy.
Misy anefa ireo tombony azo amin’ny fampiasana izany. Ohatra; ho sarona eo ireo “taxi papango” tsy manana fahazoan-dalana (licence). Tsy hahazo ity “lanterne” ity mantsy ny taxi raha tsy mahavita “contre-visite” any amin’ny kaominina na maimaimpoana aza ny fizarana azy. Tombony hafa koa, ankoatra izay, ny fidiram-bola (na kely aza) ho an’ny taxi sy ny kaominina amin’ny fampiasana ny “lanterne” vaovao. Farany, ho fantatra amin’izay ny tena isan’ny taksi marina miasa ara-dalàna eto Antananarivo amin’ny alalan’ny fampidirana ny tarehimarika rehetra ao anaty solosaina lehibe iray. Ho hita ao anatin’izany ny isan’ny taxi sy ny tompony. Mipetraka àry ny fanontaniana : iza no matahotra inona amin’izany rehetra izany, sa ambadika politika rano fotsiny haminganana ny kaominina Antananarivo-Renivohitra ?